> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ Photos si LG marquee
ENYEMAKA! Mkpa naghachi ehichapụ foto na LG marquee ekwentị!
M nwere 4GB Micro SD kaadị ebe nchekwa na m LG marquee ekwentị na ọ bụ mgbe niile jupụta na stof.
Nso nso a, m na-ehichapụ faịlụ niile m na kaadị ebe nchekwa carelessly mgbe sorting ha, dị mwute ikwu. Gịnị na-eme?
Olee naghachi ha niile?
Mgbe nke a mere, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịnọgide na ekwentị gị ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa ọma. Kwụsị iji ya ịzọpụta ọhụrụ faịlụ. Nke ahụ bụ nnọọ mkpa. Ọhụrụ ọ bụla faịlụ 'overwrtiting ochie data nwere ike ihichapụ aga na faịlụ, na ozugbo ha na-overwritten, e nweghị ohere iji nweta ha azụ. Ya mere, na-echebe ekwentị gị nke ọma mgbe ihe mberede.
Olee otú naghachi foto site na LG marquee
Prep arụ ọrụ i chọrọ ime n'ihi na LG marquee foto mgbake:
1. Get a dijitalụ USB ma ọ bụ a kaadị agụ
2. Download ihe LG marquee foto mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac
Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị, na ibudata na free ikpe mbipute n'okpuru ugbu a.
Ma software ngwaọrụ n'elu bụ pụrụ ịdabere na irè. Na ha, naghachi niile ehichapụ na formatted videos, foto na music si LG marquee kaadị ebe nchekwa ekwentị enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Wezụga ha, ha na-akwado na mgbake nke ndị ọzọ LG cell igwe. Dum ngwọta na-ewe gị a nkeji ole na ole. Ọzọ, ka na-agbalị na Windows version ọnụ.
Step1. Gbaa ndị LG marquee foto mgbake omume
Tupu na-agba ọsọ usoro ihe omume, jikọọ ekwentị gị na kọmputa na dijitalụ USB na ị na-akwadebe, ma ọ bụ jikọọ kaadị nchekwa na kaadị agụ. Họrọ ụzọ adaba n'ihi na gị. Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume na pịa "Malite" n'ihu LG marquee foto mgbake.
Step2. Ike iṅomi ehichapụ foto gị LG marquee
Họrọ ekwentị gị ma ọ na kaadị ebe nchekwa na pịa "iṅomi" na-chọta ehichapụ photos na ya.
Step3. Preview na-agbake ehichapụ foto ndị si LG marquee
Mgbe iṅomi completes, ị ga-enweta a Doppler N'ihi dị ka ndị na. Ebe i nwere ike ihuchalu recoverable photos otu otu. Mgbe ahụ akara ndị ị chọrọ na-azọpụta ha niile na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi".
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị LG marquee ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Android